Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Fomba fiaina tsara indrindra ho an'ny fahasalamana 2022
Taorian'ny taona nolalovanay rehetra (mijery anao 2020 sy 2021) dia toa manaiky ny ankamaroan'ny olona fa manana fanantenana lehibe amin'ny taona 2022 izy ireo. saingy indrisy fa tsy misy mahafehy ny hafainganan'ny fiverenan'izao tontolo izao amin'ny ara-dalàna. Ary noho izany, mila mamorona fahafaham-po sy fitomboana manokana isika rehetra amin'ny taona 19 na inona na inona anton-javatra ivelany.
Toerana iray tsara hanombohana hiantohana ny taona falifaly, mamokatra, mikaroka tena ary mihamitombo ny fitomboan'ny tena manokana dia ny fametrahana fomba fiaina ara-pahasalamana; satria rehefa miasa ho an'ny tenanao ianao dia vao mainka sarotra kokoa ny hilentika eo ambanin'ny vesatry ny toe-javatra tsy voafehinao. Fa kosa, azonao atao ny mifantoka amin'ny zavatra tsara rehetra eo amin'ny fiainanao, ny fahazarana arahinao izay mitondra fahasalamana sy fahafaham-po ho anao, ary ny fivoarana manokana izay lalovanao.
Raha nanontaniana ny toroheviny tsara indrindra momba ny fomba fiaina tsara indrindra amin'ny taona 2022, dia nanome torohevitra mazava ireo tale jeneralin'ny orinasa sy tompona orinasa. Ka raiso ny planinao ary raiso an-tsoratra ny fomba fiaina atolotry ny mpitarika orinasa mahomby ho an'ny taona tsara kokoa sy mamirapiratra kokoa.
Mifantoha amin'ny Positive
Ny mpiara-manorina ny tobim-pitsaboana allergy ao an-trano Cleared Technologies dia mandanja ny voka-tsoa be dia be amin'ny toe-pahasalamanao. Manoro hevitra izy fa ny toerana voalohany tadiavinao hanovana ny fomba fiaina ara-pahasalamana dia ao anatin'ny fanovana ny sainao avy amin'ny negativity manodidina anao mankany amin'ny positivity.
"Ny torohevitra tsara indrindra amin'ny fanovana fomba fiaina ara-pahasalamana ho an'ny taona ho avy dia ny fisafidianana ny hifantoka amin'ny tsara manodidina anao. Amin'ny vanim-potoana iainantsika iraisan'ny rehetra dia toa mora kokoa noho ny teo aloha ny mahita ny tsy mety sy ny tahotra na aiza na aiza manodidina anao, saingy aza adino ny zava-tsoa rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny sy eo amin'ny fiainanao manokana. Izany dia tafiditra ao amin'ny teoria izay ahitanao ny zavatra ifantohanao; ara-tsiansa, ny ampahan'ny atidohanao tompon'andraikitra amin'ilay tranga dia antsoina hoe Reticular Activating System, saingy na dia tsy misy teny ara-tsiansa aza dia mbola mijoro ny marina fa mamorona ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao isika amin'ny alàlan'ny fahitana ny zavatra ifantohany. Raha avelanao ho variana amin'ny tolona sy zava-mitranga ratsy manodidina anao ianao dia haka ny fiainanao. Fa raha mifantoka amin'ny lafy tsaran-javatra ianao dia hiova ny toe-tsainao ary ho sambatra kokoa ianao ary ho tony kokoa. Tsy maintsy mifoha mazoto isan'andro ianao ary misafidy ny tsara. Tsy mora izany fa hitondra fiovana lehibe amin'ny fomba fahitanao (ary noho izany misy) izao tontolo izao, ”hoy ny Dr. Payel Gupta, CMO & Co-Founder of nanala.
Manaova fanatanjahan-tena isan'andro
Impiry ianao no nilazana momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fanatanjahan-tena? Mety ho be dia be izany, fa arakaraka ny mandrenesanao zavatra amin'ny ankapobeny dia midika izany fa tena tokony henoinao izany. Ny fanazaran-tena isan'andro dia mitondra tombontsoa ara-pahasalamana marobe, ao anatin'izany ny torimaso tsara kokoa, ny fanatsarana ny angovo, ny fitantanana lanja, ny fampihenana ny tosidra ary ny fo matanjaka kokoa.
“Tanjoko manokana ny miantoka fa manao fanatanjahan-tena isan'andro aho. Be atao ny andro sasany ary sarotra ny mitady fotoana hanaovana fanatanjahan-tena nefa mbola mandamina fotoana hifindrana aho. Ny 'fanatanjahan-tena' dia tsy voatery midika hoe mandeha any amin'ny toeram-panatanjahantena na manaraka drafitra fanazaran-tena hentitra. Indraindray ny endrika fanazaran-tena faran'izay kely indrindra dia mety ho mahafinaritra indrindra, toy ny mandehandeha eny ivelany ohatra. Ny fanatanjahan-tena isan'andro dia mitazona anao amin'ny toe-batana tsara amin'ny fanamafisana ny hozatrao fa manampy ny sainao amin'ny fanalefahana ny adin-tsaina koa izany. Ankehitriny satria efa lasa fahazarana izany, dia manantena ny fanazaran-tena isan'andro aho satria izao no fotoana hamonoako ny atidoha miasa, hivezivezy ary hahatsapa ho toy ny nanao zavatra tsara ho an'ny fahasalamako, "hoy i Heidi Streeter, mpanorina. ny Holiday St.
Tohero ny andro ratsy
Mampahatsiahy ny maha-zava-dehibe ny fitazonana ny tenanao amin'ny fenitra ambony momba ny toe-tsaina sy ny saina ny mpanorina ny toeram-pitsaboana famerenam-bolo antsoina hoe Jae Pak; Manoro hevitra izy mba hampihenana ny andro ratsy tsy mamokatra amin'ny alàlan'ny tsy famelanao fotsiny ny tenanao hanaiky ny ratsy.
"Ny teny filamatra iray izay nanampy ahy tsara dia ny torohevitra nomena ahy taloha mba tsy hamela ny tenako hanana andro ratsy. Mazava ho azy fa hisy toe-javatra sarotra tsy maintsy hodiavinao ary indraindray sarotra ny fiainana ka te hanaiky ny tsy mety ianao, na hanaisotra ny fahatsapan'ny andro iray manontolo. Eritrereto anefa ny habetsahan’ny fiainana tsy azonao, raha manaiky ho resin’ny andro ratsy ianao! Na ny mamela ny marainanao na ny ampahany amin'ny andronao ho toy ny andro ratsy dia mampihena ny fotoana sarobidy azonao laninao hankafy ny fiainana manodidina anao. Tohero amin'ny herinao rehetra àry ny andro ratsy ary safidio ny fahasambarana”, hoy i Jae Pak, Mpanorina ny Jae Pak MD Medical.
Mifantoha amin'ny sakafo
Toy ny maha zava-dehibe ny fampihetsiketsehana ny vatanao, dia toy izany koa ny famahanana ny vatanao ny sakafo mamelona azy. Ny 70% amin'ny sakafon'ny Amerikana dia amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny sakafo voahodina; satria mora sy mahazatra ny manaraka an'io zava-misy io dia mila mitandrina tsara ireo akora apetrakao ao amin'ny vatanao ianao. Indraindray ny fahazoana sakafo ampy dia mila manao safidy sarotra amin'ny filazana hoe tsia amin'ny sakafo sasany ary mirona mankany amin'ny safidy tsara kokoa. Ny mpanorina, tale jeneraly ary lehiben'ny famolavolana ho an'ny Unico Nutrition dia manoro ny laharam-pahamehana ny sakafo ho an'ny taona 2022 salama kokoa.
“Mety hanaitra izany raha tena mijery ny zava-misy marina momba ny isan'ny Amerikanina mahazo ny otrikaina sy ny otrikaina ilaina ho an'ny fahasalamana tsara indrindra ianao. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahavita mamahana ny tenany amin'ireo akora izay mampiroborobo ny vatana miasa tsara. Na dia tsy ho takatry ny ankamaroantsika mihitsy aza ny zava-mahagaga ao ambadiky ny fomba anampian'ny akora sasany ny fizotran'ny ao anatiny sy ny tena ataon'ny vatantsika handrava ny otrikaina, dia afaka mianatra mihinana araka ny tokony ho izy. Ataovy ho taonan'ny sakafo ny taona 2022, na efa misakafo tsara ianao na tsia. Maninona raha asiana fanantitranterana ny fianarana bebe kokoa momba ny vitamina sy mineraly mahasoa izay manana anjara toerana tsara eo amin’ny fahasalamanao ary avy eo dia miezaha mba hahazoana antoka fa ho ampy azy ireo ianao? Na inona na inona ambaratonga misy anao amin'izao fotoana izao, dia azonao atao ny manao laharam-pahamehana ny sakafo mahavelona. Hisaotra anao ny tenanao amin'izao fotoana izao sy ny ho avy, ”hoy i Lance Herrington, mpanorina, tale jeneralin'ny orinasa ary lehiben'ny famolavolana UNICO NUTRITION.
Manodidina ny tenanao amin'ny olona mampahery
Ny olona eo amin'ny fiainanao dia mamolavola ny endriky ny tontolonao, tena misy fiantraikany amin'ny fisian'ireo manodidina anao. Fantatrao angamba fa ny olona dia afaka manomboka manaraka ny toe-tsaina sy ny fitondran-tenan'ireo izay laniny indrindra, izay lazain'ny filoha sady mpanorina ny MicrodermaMitt fa mety hisy fiantraikany amin'ny fahazarana mahasalama amin'ny taom-baovaonao.
“Fohy loatra ny fiainana raha tsy mandany andro miaraka amin'ny olona tsy mendrika ny fotoananao. Fantatrao hoe iza izy ireo; Amin'ny ankapobeny dia afaka mahatsapa avy hatrany ianao amin'ny fomba fisintonany anao ho amin'ny poizina sy ny ratsy. Ny fotoanao sarobidy sy sarobidy dia tokony holaniana amin'ny olona izay manandratra sy mampahery anao ary ho eo amin'ny fotoan-tsarotra indrindra aminao. Fantatrao ilay fitenenana hoe 'ianao no mandany fotoana miaraka aminao' ary azo antoka fa marina izany. Arakaraka ny handanianao fotoana miaraka amin'ny olona tsy maneho ny karazan'olona tianao hahatongavana, dia ny fotoana laninao tsy hahatongavanao ho tena idealy anao. Raha te ho salama 2022 ianao dia mila mitandrina amin'izay avelanao hiditra ao amin'ny toerana akaiky anao, ”hoy i Judy Nural, filoha sady mpanorina ny MicrodermaMitt.
Sokafy ny fiainanao ho amin'ny vaovao
Ny mpanorina sy Tale Jeneralin'ny orinasa fitahirizana entana Bounce dia manoro hevitra ny hamorona fiainana ho anao izay ahafahanao manandrana zava-baovao. Mety hahafinaritra kokoa ny tontolonao rehefa manokatra ny sainao amin'ny traikefa sy fahafahana vaovao ianao.
“Faritra iray amin'ny fiainana mitondra fientanentanana sy aingam-panahy ny fikatsahana traikefa vaovao. Raha tokony hijanona amin'ny toerana iray ianao satria efa nahazo aina na nahita fomba fanao mety aminao, dia zava-dehibe ny mamela ny tenanao hanandrana zava-baovao. Raha te-hihazona ny tenanao amin'ny rantsan-tongotrao ianao amin'ny alàlan'ny fikarohana lalandava vaovao, ny torohevitra tsara indrindra ho anao dia ny tsy hatahotra ny hahita sy hanandrana zava-baovao. Mahereza amin'ny 2022!” hoy i Cody Candee, Mpanorina sy Tale Jeneralin'ny Aza kivy.
Aza adino ny ilana ny torimaso tsara! Ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana dia manoro hevitra anao mba hatory adiny fito farafahakeliny isan'alina ho an'ny fampandehanana ara-tsaina sy ara-batana tsara indrindra. Azonao atao ny mahatsapa ny voka-dratsy ateraky ny fahaverezan'ny torimaso ora vitsivitsy saika avy hatrany ny ampitson'iny, izany no antony nanoroan'ny talen'ny marika Healist Naturals fa ny olona rehetra dia manao laharam-pahamehana ny torimaso amin'ny taona 2022.
"Mba hiantohana ny taona salama amin'ny 2022 dia mila manao laharam-pahamehana ny torimaso ampy. Heveriko fa matetika ny olona dia tsy mahatsapa ny halehiben'ny anjara asan'ny torimaso eo amin'ny fiainantsika; rehefa mahazo torimaso ampy amin'ny alina ianao raha oharina amin'ny torimaso kely kokoa noho izay ilain'ny vatanao dia mahatsapa hery ambony kokoa, fahazavana ara-tsaina, fanatsarana ny toe-po sy ny fomba fijery, ary ny fizotran'ny anatiny miasa tsara. Na dia mety tsy hihevitra ny torimaso ho ambony indrindra amin'ny tanjonao amin'ny taona 2022 aza ianao, dia tadidio fa afaka misaotra ny haavon'ny torimaso ara-pahasalamana ianao amin'ny singa hafa mety ho tianao hotratrarina amin'ny 2022: ny vokatra tianao hiainana any am-piasana? Azonao atao ny misaotra anao amin'ny torimaso tsara amin'ny fahazavana ara-tsaina sy ny fiaranao. Ny ora tokony hatoriana dia mihoatra ny fito isan'alina, koa aoka ho azo antoka fa mandamina ny andronao ianao mba hanomezana fotoana hatoriana mendrika, "hoy i Sarah Pirrie, Talen'ny marika. Naturals manasitrana.
Dylan Arthur Garber, mpiara-manorina ny orinasam-pandrenesana Audien Hearing dia manoro hevitra anao haka fotoana hamakiana mba hanitarana ny fahalalanao sy hanome anao ireo fitaovana ilainao hanatsarana ny tenanao.
"Misy tsy manam-petra ny fanatsarana ny tena manokana sy ny fitomboan'ny tena manokana eny an-tsena amin'izao fotoana izao, na ny kilasika amin'ny sehatry ny fanatsarana ny tena sy ny famoahana vaovao. Tena manoro hevitra aho fa izay rehetra te hanova ny fiainany sy hamorona fahazarana tsara dia manararaotra ny harenan'ny fampahalalana misy amin'izao fotoana izao. Tsy voatery hametra ny tenanao amin'ny karazana fanampiana tena ianao, na amin'ny tsy fiction; mety ho fandosirana mahafinaritra ihany koa ny tantara foronina. Raha ny marina, ny fomba tsara indrindra hanehoana ny faharanitan-tsaina dia ny famakiana tsara, "hoy i Dylan Arthur Garber, mpiara-manorina ny Audien Hearing.
Mandania fotoana miaraka amin'ny olon-tiana
Ny ekipan'ny orinasa ao amin'ny marika microbiome boosting soda OLIPOP dia manome lanja ny maha-zava-dehibe ny fananganana fiainana izay manodidina anao amin'ny olon-tianao. Ny fahazarana dia dingana mavitrika ataonao mandra-pahatongan'izy ireo ho mahazatra, ka izany no mahatonga anao ho niniana handany fotoana miaraka amin'ireo olon-tianao mba hahatonga azy ireo ho ampahany tsy tapaka amin'ny fiainanao.
"Ny fahazarana ara-pahasalamana dia ny manokana fotoana hiarahana amin'ny olon-tianao. Tsy misy mahalala anao, manohana anao, mamporisika anao, ary mitana andraikitra toy ireo izay tia anao, ka ny fampidirana azy ireo eo amin'ny fiainanao dia tsy fihetsika feno fitiavana fotsiny fa fomba mafy orina ihany koa mba hiantohana anao hijanona eo amin'ny lalana mankany amin'ny tena tsara indrindra, ” hoy i Steven Vigilante, Lehiben'ny Fampandrosoana Orinasa Vaovao, ary Melanie Bedwell, Talen'ny E-varotra an'ny OLIPOP.
Ampidiro ao anatin'ny sakafonao ny proteinina
Jeff Goodwin, talen'ny varotra sy e-varotra amin'ny orinasa Orgain sakafo madio dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fahazoana proteinina ampy amin'ny sakafonao.
"Ao amin'ny Orgain dia mino izahay fa ny herin'ny sakafo tsara sy madio dia afaka manampy anao hanana fiainana salama sy mavitrika, ka izany no antony hampirisihanay ny tsirairay mba hihinana proteinina ampy ho ampahany amin'ny sakafony; Tsy voatery ho sarotra ny mahazo proteinina ampy miaraka amin'ny vovo-tsavony sy ny hozatsika ary ny fanoloana sakafo. Ny proteinina dia singa manan-danja amin'ny fanamafisana ny hozatrao, ny fanamboarana ny tavy ary ny fampiroboroboana ny fahasalaman'ny taolana. Raha te ho salama ianao amin'ny taona 2022 dia aza manahy ny haavon'ny proteininao, ”hoy i Jeff Goodwin, Tale sy Talen'ny Performance Marketing & E-Commerce an'ny Jeff Goodwin. Orgain.
Araho ny Modely Asa Hybrid
Indraindray ny fikarakarana tsara ny tenanao dia toa manome fahafaham-po bebe kokoa ny tenanao mba haka 'fotoanao' mandritra ny andro fiasana. Ny Tale Jeneralin'ny Outstanding Foods dia manoro hevitra ny hamelanao ity ho toy ny fanarahana ny maodely asa hybrid mba hisy fotoana sahaza ho an'ny asa sy ny fialan-tsasatra tsy misy fifanoherana mikorontana.
“Ny fampidirana ny fikarakarana tena ao anatin'ny ora fiasanao dia mety hahatonga ny taona 2022 ho salama. Ny fakana fotoana sarobidy ho anao mandritra ny andro fiasana dia mety hahatonga anao hamokatra bebe kokoa. Manoro hevitra aho hanandrana modely asa hybrid. Mety hisy 'ora fototra' ao amin'ny orinasanao manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 4 izay idiran'ny mpiasa ao amin'ny birao, ahafahan'ny ekipa feno ho eo amin'ny fihaonana mivantana sy fiaraha-miasa, ary avelao izy ireo hiasa any an-trano, hanao ny azy manokana. fandaharam-potoana ho an'ny andro fiasana sisa. Izany dia mamela anao sy ny ekipanao hamorona fifandanjana eo amin'ny fiainana amin'ny asa izay hanampy ny olona rehetra hahomby sy ho salama, "hoy i Bill Glaser, Tale Jeneralin'ny Sakafo miavaka.
Henoy ny Audiobooks hitarihana ny dianao manokana
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanovana ny fiainanao sy hanovana ny sainao dia ny fitodihana amin'ny fahendrena sage sy ny traikefan'ny hafa manana fahaizana. Ny boky momba ny fanampiana tena sy ny fanatsarana ny tena dia fomba mahafinaritra hidirana amin'ireo fitaovana ilainao hanaovana fiovana ilaina eo amin'ny fiainanao. Saingy satria sahirana ianao ary mety tsy manam-potoana hipetraka miaraka amin'ny boky tsara, ny mpiara-manorina sy talen'ny asa ao amin'ny Digital Third Coast dia manazava ny fomba mora azo ny audiobooks amin'ny fiainanao mandritra ny fotoan-tsarotra toy ny rehefa mitondra fiara ianao.
“Mandany 45 minitra eo ho eo amin’ny fiarakodia mankany sy miverina miasa aho isan’andro. Afaka mandany izany fotoana izany aho amin'ny fihainoana mozika na miresaka radio, saingy misafidy ny handany izany amin'ny fihainoana boky momba ny raharaham-barotra sy boky momba ny fanatsarana ny tena aho. Tao anatin'ny roa taona sy tapany farany dia efa ho 40 no nihaino boky audio aho. Ireo boky ireo dia nanome ahy fahatakarana tsy mampino momba ny fomba fampandehanana ny orinasako sy hanatsara ny fahaizako. Afaka mihaino boky vaovao aho ao anatin'ny andro vitsivitsy, mifanohitra amin'ny famakiana boky iray, izay mety haharitra iray na roa volana, fara fahakeliny, raha tsy maharitra kokoa, satria miaraka amin'ny ankizy kely roa ao an-trano, dia tsy mahita fotoana mihitsy aho, ”hoy i George. Zlatin, mpiara-manorina sy talen'ny asa ao amin'ny Morontsiraka fahatelo nomerika.
Tsarovy ny Misaotra
Miankina amin'ny sainao ny fikarakarana tena matanjaka satria misy fiantraikany amin'ny fihetseham-ponao ny fomba fisainanao. Mba hahatonga anao ho kinova mamokatra sy mahomby indrindra amin'ny tenanao, ny Tale Jeneralin'ny SnoopWall dia manoro hevitra ny hanombohanao ny andro amin'ny fankasitrahana.
“Mifoha aho ary manomboka isan'andro amin'ny eritreritra voalohany: misaotra noho ny habetsahan'ny fiainako—family, namana, orinasa, ary maro hafa. Tsy misy zavatra tsara tonga mora foana. Ny asa mafy sy ny fandavan-tena dia misy vokany foana. Ny manomboka isan'andro amin'ny eritreritra matanjaka sy miabo no fomba tsara indrindra hanombohana isan'andro. Mino aho fa ny toe-tsaina miabo no fanalahidy handresena ny sakana rehetra, ary avoakako amin'ny ekipako izany. Tahaka ny fifindran'ny negativity - eritrereto: ny paoma lo iray eo amin'ny farany ambany amin'ny barika dia hanimba azy rehetra amin'ny farany - toy izany koa ny fahatsarana. Misafidiana ny ho tsara. Tandremo ny fihetsikao sy ny fiantraikan'izany amin'ny hafa, ”hoy i Gary Miliefsky, Tale Jeneralin'ny SnoopWall.
Atolory ny fiainanao ilay olona tianao ho tonga
Lauren Kleinman, mpiara-manorina ny sehatra fanolorana vokatra The Quality Edit, dia nanoro hevitra fa ny lalana mankany amin'ny 2022 salama kokoa sy ny manaraka dia ny fiezahana mankany amin'ilay olona tianao hahatongavana sy ny fiainana tianao hiainana.
"Ny soso-kevitro tsara indrindra amin'ny fanehoana ny olona tianao hahatongavana sy ny fiainana tianao hananana amin'ny ho avy dia ny fanolorana ny tenanao amin'izao fotoana izao ho toy ny olona tianao hahatongavana indray andro any. Manoro hevitra aho fa hipetraka ianao ary hanao drafitra amin'ny antsipiriany momba ny tenanao farany ary avy eo miasa isan'andro mba ho tonga amin'io dikan-teny io amin'ny fanolorana an'io sary io izao. Ny tsipiriany rehetra amin'ny fiainanao dia tokony hameno ny tenanao amin'ny ho avy rehefa mamboly ny fiainana aingam-panahy ianao; manomboka amin'ny fomba famolavolanao ny bika aman'endrinao ka hatramin'ny safidy sakafo ataonao ka hatramin'ny fitaovana vakinao, dia tadidio ao an-tsainao ny dikan-teny farany amin'ny fiainanao," hoy i Lauren Kleinman, mpiara-manorina ny Ny fanitsiana kalitao.
Miaraka amin'ireo toro-hevitra manam-pahaizana momba ny fomba hampisondrotra ny fahazarana fiainanao manokana ianao dia tokony ho vonona ny hiditra amin'ny taona vaovao feno fankasitrahana, positivity, fitarihana ary fikarakarana tena. Na dia tsy misy olona afaka maminavina ny toetry ny tontolo ivelany na ny zava-mitranga ho hitanao amin'ny 2022, ianao dia manana ny fifehezana rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'ny fomba fidianao hijerena sy hitondrana ny fiainanao. Aza mandany iray minitra amin'ny tahotra na fisafotofotoana; fa ampidiro ao anatin'ny fahazaranao ireo torohevitra ambony ireo ary jereo ny fiovan'ny fiainanao ho tsara kokoa. Ary vaovao tsara: tsy mila miandry ny Taom-baovao ianao vao mamorona fahazarana mahasalama. Maninona raha manomboka anio?